जिससले दिएको बजेट स्थानीय तहले लगेनन् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २२ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:५०
दराैँदी समाचारदाताः जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले दिएको बजेट गोरखाका स्थानीय तहले उपयोग गर्न सकेका छैनन् । पालुङ्टार नगरपालिकाले बाहेक कुनैपनि पालिकाले बजेट नलगेको निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी दिनेश चापागाँईले बताए ।
जिससको कोषमा मौज्दात रहेको १८ करोड ८४ लाख रकममध्ये दुईवटा नगरपालिकालाई एक करोड ४० लाख, चुमनुब्री गाउँपालिकालाई एक करोड २० लाख र अन्य गाउँपालिकालाई एक करोड १० लाखका दरले बिनियोजन गरेको थियो । तर पालुङटार नगरपालिकाले ९८ लाख मात्र लगेको र अन्य पालिकाहरुले रकम नलगेको निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी चापागाईँले बताए ।
गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले सबै स्थानीय तहलाई योजना पेश गर्न अनुरोध गरेको थियो । पालुङटार नगरपालिकाले कार्यालय भबन निर्माण गर्ने योजना पेस गरेको थियो । गोरखा नगरपालिकाले वडा नम्बर १२ को कार्यालय भबन निर्माण गर्ने योजना ल्याएपनि बजेट भने लगेको छैन । ८० लाखमा वडा भबन निर्माण गर्ने योजना पेश भएको र बाँकी रकमको योजना पेस हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
शहिदलखन गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको भबन निर्माण गर्ने योजना पेस गरेको थियो तर बजेट माग गरेको छैन । भबन निर्माण अघि बढेको छैन ।
भिमसेन थापा गाउँपालिकाले १, २, ६ र ८ नम्बर वडा कार्यालय भबन निर्माण गर्ने योजना पेस गरेको थियो । तर स्टमेट पेश नहुँदा पहिलो किस्ता रकम समेत जान सकेको छैन ।
लगत स्टमेटसहित रकम माग भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले दुई चरणमा गरी रकम निकासा दिने निमित्त समन्वय अधिकारी चापागाँईले बताए । ‘सम्झौता गरेपछि र सम्पन्न गरेपछि भुक्तानी दिन्छौँ’ उनले भने । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको भबन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । गण्डकी गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ को भबन र खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने निणर्य गरेपनि बजेट लगेको छैन । ‘यी स्थानीय तहले योजना पेश गरेपनि स्टमेट गरेर बजेट निकासाको माग गरेका छैनन्’ उनले भने ।
अजिरकोट, सिरानचोक, धार्चे, आरुघाट र चमुनुब्री गाउँपालिकाले भने जिल्ला समन्वय मितिको मौज्दात कोषमा रहेको रकम के मा खर्च गर्ने भन्ने एकिन गर्न सकेका छैनन् । यी स्थानीय तहले योजना नै पेस नगरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले बताए । ‘छिटो योजना पेश गर्न र सम्झौता गरेर काम गर्न पटक(पटक भनेका छौँ’ उनले भने ‘तर चासो दिएका छैनन् ।’ योजना अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, प्रशासकिय अधिकृतसँग जिससबाट बिनियोजित रकम छिटो फस्र्यौट गर्न अनुरोध गरेपनि चासो नदिएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहलाई आफ्नै बजेट कहाँ खर्च गरुँ जस्तो भएको होला, यहाँबाट छुट्याएको बजेटमा खासै चासो दिएनन्’ उनले भने ।
भबन निर्माणको योजना धेरै रहेकाले जग्गा बिवाद हुँदा समयमै बजेट निकासा नभएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोकुमार गुरुङले बताए । ‘स्थानीय तहलाई पहिलो चरणमा दिएको बाहेक अन्य रकम पनि बिभिन्न ठाउँका योजनामा खर्च गर्ने सोच थियो’ उनले भने ‘तर कसैले पनि सबै रकम लैजान सकेनन्, काम छिटो गरेनन ।’ जिल्ला समन्वय समितिमा वर्षौँ अघिदेखि रोयल्टी बापतको रकम जम्मा भएको थियो । आन्तरिक आम्दानी र रोयल्टीको जम्मा भएको रकम स्थानीय तहलाई अहिले बाँडफाँड गरिएको हो । दुई वर्ष यता उक्त रकम यहाँका स्थानीय तहले पुरुै लैजान सकेका छैनन् । रकम फ्रिज नहुने भएकाले स्थानीय तहले कम चासो दिएको जिससका कर्मचारी बताउँछन् ।